MICE Ganacsi ayaa dib ugulaabtay Guam iyada oo lagu daray talaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » MICE Ganacsi ayaa dib ugulaabtay Guam iyada oo lagu daray talaalka
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Guam • Caafimaadka Warka • News • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Way adag tahay in adduunka meel ka fiican lagu qabto shir marka abaalmarinta la siiyo ay tahay in la is tallaalo. Guam ayaa heley oo soo dhoweeyey kooxdii ugu horreysay ee MICE ah oo ka timid 100 oo ka timid Taiwan illaa xeebaheeda.
Imaatinka VIP-da oo leh muusikada Guam iyo hoggaamiyeyaasha dalxiiska GVB ayaa soo dhoweeyay kulammadii ugu horreeyay, Dhiirrigelinta, Shirka iyo Bandhigyada (MICE) ee ka socda Taiwan shalay. Ku guulaysatay Madaarka Caalamiga ah ee Pat. Kooxdu waxay qayb ka ahayd barnaamijka jasiiradda adduunka laga aqoonsan yahay ee loo yaqaan 'Air V&V'.
ADATA Technology Co., Ltd. ayaa kafaala qaaday in kabadan 100 shaqaalaheeda inay booqdaan Guam iyadoo ikhtiyaar u ah inay iska talaalaan. Shirkaddu waa soo saaraha xusuusta iyo keydinta ee Taiwan oo lagu qiimeeyay inay tahay shirkadda labaad ee ugu weyn adduunka ee soo saarta DRAM oo leh qiimo suuq ah $ 680 milyan.
Kafaala qaadka shaqaalaha ADATA waxaa kamid ahaa duulimaadka, hoteelada hoteelada, iyo qarashka karantiilka khasabka ah markay ku laabtaan dalkooda. ADATA waxay sidoo kale ku dhiirigelisay shaqaalaheeda inay ku casuumaan xubnaha qoyskooda inay kaqeybqaataan safarkan dhiirigalinta ah.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno kooxdan, waxaana dooneynaa inaan u mahad celino ADATA oo u doortay Guam meesha ay doorbidayaan," ayuu yiri Madaxa & Madaxa GVB Carl TC Gutierrez. "Tani waa tusaale fiican oo ku saabsan sida barnaamijkeenna Air V&V uu u caawinayo shakhsiyaadka iyo shirkadaha doonaya inay si nabadgelyo ah ugu safraan ikhtiyaarka ah in la is tallaalo oo lagu nasto jannada jasiiradda."
Xubin ka tirsan kooxda ADATA ayaa timid Guam iyada oo ku cayaareysa muusikada maxaliga ah
Kooxda ADATA, oo ku timid duulimaadka charter-ka ee loo yaqaan 'EVA Air charter', ayaa waxay ku sugan yihiin Hyatt Regency Guam iyo The Tsubaki Tower muddo afar maalmood ah.
Laba toddobaad ka hor barnaamijka u dhexeeya Taiwan iyo Guam waxaa loo bilaabay booqdayaasha inay soo booqdaan rtallaal intaad fasax ku jirto dhulkan quruxda badan ee Mareykanka ee Badweynta Baasifigga.
Ku saabsan Hawada V & V
Barnaamijka Air V&V waxaa soo diyaariyay Guam Bureau Bureau si loogu dhiiri galiyo kuwa 12 jirka ah iyo wixii ka weyn inay helaan tallaalka COVID-19 inta lagu guda jiro fasaxa Guam. Ka qaybgalayaashu waxay kala dooran karaan xirmooyinka safarka iyo dalxiisyada ee lagu soo saaray iyadoo lala kaashanayo ganacsiga safarka ee Guam, hudheelka, iyo la-hawlgalayaasha caafimaadka. Barnaamijkan waxaa loola jeedaa in lagu boodo warshadaha dalxiiska ee Guam iyadoo la muujinayo dareenka diirran ee Håfa Adai iyo soo dhaweynta dadka reer Guam.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka Air V&V, booqo visitguam.com/airvv ama email [emailka waa la ilaaliyay].